UNgqonqoshe ufuna isukunyelwe eyokubiza kwama-data kuleli | isiZulu
Cape Town – UNgqongqoshe wezokuXhumana kanye nezamaPosi, uSiyabonga Cwele, uthi amanani ama-data kuleli “alokhu ephezulu”, nokusho ukuthi akukho ukuncintisana ezinkampanini ezinkulu zezokuxhumana.
Esitatimendeni sabezindaba ngaphambi kwenkulumo yakhe yasePhalemende ngesabelomali, uCwele uthe uMnyango wakhe wazi kahle kamhlophe ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bakholwa ukuthi ama-data kumele ehle.
OLUNYE UDABA: Angase ehle kakhulu ama-data kwaVodacom, kusho isikhulu
Ubecaphuna embikweni we-Independent Communications Authority of South Africa (Icasa) nokhombisa ukuthi ukusetshenziswa kwama-data sekunyuke ngo-55%, ngesikhathi inzuzo yama-data yona inyuke isuka ku-R30bn iya ku-R38bn. Yize noma imisebenzi yehle ngo-4 000 intengo yama-data ayikasuki ezingeni, kusho uCwele.
Ngenxa yalokhu, uNgqongqoshe ukhiphe umyalelo kwi-Icasa ukuthi ishaye imithetho ezoqinisekisa “ukuncintisana okusebenzayo” emkhakheni wezokuxhumana.
“Lesi simo (samanani aphezulu ama-data) singase sidinge ukungenelela kweCompetition Commission,” kusho uCwele.
“Sinxusa izinkampanini ukuthi ziqale ukuncintisana ngomsebenzi ukuqinisekisa intengo yama-data kanye nokushaya ucingo yehlela ezingeni elikhonekayo noma ngaphansi kuka-2% wemali engenayo emakhaya.”
Ngonyaka odlule kwasabalala ezinkundleni zokuxhumana umkhankaso wokuthi kwehliswe intengo yama-data, i-#DataMustFall, nowawuqhutshwa ngumsakazi odumile, uThabo “Tbo Touch” Molefe, nowakubeka ngembaba ukuthi amanani ama-data eNingizimu Afrika “awukubanjwa inkunzi ilanga libalele” nokuthi le ntengo kumele yehle.